China SY295 Inopisa Yakakungurutswa U Steel Sheet Pile Yekuvaka fekitori nevagadziri |Zhanzhi
Kupisa yakakungurutswa U type simbi pepa murwi isimbi yesimbi murwi inogadzirwa nekupisa kukungurutswa kuburikidza newelding.Nekuda kweiyo tekinoroji yepamusoro, kukiya kwayo kuruma kune yakasimba kudzivirira mvura.
Inopisa yakakungurutswa U yemhando yesimbi simbi murwi maitiro ndeye: Kupisa-yakakungurutswa simbi yakatsikirirwa patembiricha inopfuura 1,700F, izvo zvinoita kuti zvive nyore kuumba uye kuumba.1) Iro rectangular danda guru, rinonzi billet, rinopisa uye rinoputika mumupumburu mukuru;2) Mupumburu wesimbi unofambiswa kuburikidza neakatevedzana ma rollers, achiri patembiricha yakanyanya, kuti awane zviyero uye chimiro chinodiwa.
1) Giredhi: SY295/SYM295 kana SY390/SYM390
3) Technique: inopisa yakakungurutswa
5) Sevhisi: kupenda, kubaya
Imwe inopisa yakakungurutswa simbi pepa saizi murwi
1)Kumwe kupindirana kwakasimba: Izvi zvinobvumira mashiti kuti atyaire uye kudhonzwa kakawanda mazariro asati asakara.
2)Zviri nani-inokodzera kutyaira murwi wakaoma: Iwo anovharira pamapepa anopisa-akatenderedzwa mirwi zvakare akakora uye akaomarara kupfuura iwo echando-akakungurutswa pepa murwi.Izvi zvinopa mirwi yeshizha simba rakakura kuti riendeswe munzvimbo dzakaoma pasi
3) Yepamusoro yakagadziridzwa simbi yemukati: LEED zvinodiwa dzimwe nguva zvinoraira kushandiswa kwezvinhu zvakadzokororwa.Mirwi yemashizha anopisa ane inenge zana muzana yesimbi yakadzokororwa, nepo mirwi inotonhora-yakaumbwa nepepa inowanzo sanganisira zvikamu makumi masere kubva muzana zvakadzokororwa.
4)Kuwedzera-kusimba kwemvura: Kupisa-yakatenderedzwa mapepa mirwi inoita zvirinani mukuyedzwa kweseepage, nekuda kwechikamu chikuru kune yakaomesesa inopindirana.
5) Kuvaka kunoenderana nemhoteredzo, uye huwandu hwevhu hwakatorwa uye kongiri inoshandiswa yakaderedzwa zvakanyanya, iyo inogona kunyatso chengetedza zviwanikwa zvevhu.
Anopisa akakungurutswa U type simbi simbi mirwi yakashandiswa zvakanyanya mumabasa echigarire uye echinguvana pasi rese.Inopisa yakatenderedzwa U mhando yesimbi simbi murwi inoshandiswa zvakanyanya muchirongwa chemafashama, chirongwa chekuvaka, kuvaka wharf uye zvichingodaro.